Akhriso : Heshiiska Ay Wada Gaareen Dowladda Federaal iyo Dowled gobaleedka Galmudug – Goobjoog News
Dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Galmudug, ayaa maanta war-murtiyeed ka soo saaray heshiis ay ku gaareen magaalada Cadaado ee gobalka Galgaduud,labada dhinac ayaa isku raacay ilaa shan qodob kuwaas oo saldhig u ah heshiiska la gaaray, waxaana ka mid ah.
1.Madaxdu waxay si wadajir ah u bogaadiyeen soo dhaweyntii diirranayd ee 26kii Juun, 2019 loogu sameeyay Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Jederaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre magaalada Cadaado.
2. Madaxweyne Xaaf iyo Ra’iisul Wasaaee Khayre waxa ay isla garteen in la dajiyo geeddi socodka iyo hannaanka dib u heshiisiinta iyo doorashooyinka si loo helo Galmudug mideysan.
3. In Dowlad Goboleedka Galmudug ay qaadato kaalinteeda kaga aaddan arrimaha dib u heshiisiinta iyo doorashooyinka iyada oo kaashanaysa Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib u heshiisiinta ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya.
Heshiiska lagui gaaray cadaado ayaa imaanaya ayadoo labadii maalin ee tagatay ay magaalada shir ku lahaayeen madax ka socotay dowladda federaalka iyo dowlad gobaleedka Galmudug.
Dhageyso: Wasaaradda Amniga Jubbaland Oo Sheegtay Iney Howlgal Ku Dileen Xubno Al-shabaab Ah